Siri kusangana pamwe nevechitatu-bato maapplication anoshanda sei? IPhone nhau
Sei Siri Kubatanidzwa neTatu-Bato Mapurogiramu Anoshanda
Kunyangwe ini ndataura pane dzimwe nguva kuti ndakasuwa kuti Apple haina kuburitsa vhezheni nyowani yemubatsiri wayo uyo anotora mukana wehunyanzvi hweVocalIQ, inofanira kuzivikanwa kuti Siri inotora danho hombe kumberi muIOS 10. Chikonzero chikuru (kwete chega) kuchave kubatanidzwa kweSiri neyechitatu-bato kunyorera, chimwe chinhu chichavepo nekuda kweSiriKit yekuvandudza turu uye icho chichatibvumidza isu, tichishandisa muenzaniso wenguva dzose, kutumira WhatsApp meseji tisina kuisa iyo application.
Mune yekutanga vhezheni yeIOS 10 inoburitswa munaGunyana, iyo Siri API ichangoshanda chete nemhando nhanhatu dzekushandisa: Uber nzendo (Ride Booking), mameseji, kutsvaga kwemifananidzo, kubhadhara, kufona kweVoIP uye zviitiko zvemitambo senge Runtastic, uyo atozivisa kare kuti ichi chichava chimwe chekutanga kunyorera kuchatora mukana weSiri kubatanidzwa neyechitatu-bato kunyorera. Kune rimwe divi, nzira yaApple yekufunga nezvazvo zvese zvinoreva kuti vanogadzira havafanirwe kunetsekana nenyaya hombe dzine chekuita nezwi.
1 Siri ichangoshanda chete nemhando nhatu dzemaapplication, izvozvi
2 Hatizokwanise kushandisa Siri kana Gmail kana Spotify ... zvakadaro
Siri ichangoshanda chete nemhando nhatu dzemaapplication, izvozvi
Apple inobata kuzivikanwa kwenzwi uye kududzirwa kwemibvunzo. Nenzira iyi, Siri anozofunga kupindura mibvunzo / zvikumbiro zvedu kana 'kukumbira rubatsiro' kubva ku chechitatu bato kunyorera. Nechimwe chinhu, vagadziri havafanirwe kunetseka nezve kugadzira software iyo inonzwisisa zvatiri kukumbira kwazviri; kune rimwe divi, kuvanzika kwedu kuchiri kudzivirirwa, zvirinani mune dzidziso (sezvatichanyora mune imwe chinyorwa gare gare)
La ruzivo rwavanogamuchira chechitatu-bato kunyorera inogumira pane zvavanoda saber kuita zvatinoda. Siri anongoshandisa iro rakakodzera ruzivo kubva kumubvunzo / chikumbiro uye anoendesa iyo data kune kunyorera. Kune chikamu chayo, yechitatu-bato mushambadzi application inoshandisa iyo SiriKit APIs kudzorera mhinduro ichazoratidzwa pachiratidziri.
Zvese izvi zvinoreva kuti Siri haizokwanise kubatanidzwa mune chero chishandiso kubva kuApp Store, asi inongova nyaya yenguva Apple asati ape mukana wevagadziri ava zvakare (pamwe mune vhezheni yeIOS ivo vavanozovhura rinotevera chitubu, rakaenzana neIOS 9.3 yeIOS 10). Isu takambonyora kuti zvaigona kuti maficha akadai seGmail kana Google Calendar anogona kutarisirwa kubva kuna Siri, asi panguva imwechete isu zvakare takati izvi hazvigone kuzadzikiswa nekuti iwo mashandisiro emakwikwi. Hazvizivikanwe kana icho chichava icho chikonzero, asi (nguva dzose "panguva ino") Siri haazokwanisi kutaurirana nekushandisa kweepodcast, tsamba, mimhanzi, nhamba dzemitambo, zviyeuchidzo, nezvimwe.
Hatizokwanise kushandisa Siri kana Gmail kana Spotify ... zvakadaro
Izvi zvinogona kudzosera kumashure, semuenzaniso, kune vashandisi ve Spotify, asi chaivewo chimwe chinhu chataigona kutarisira. Apple yatora danho hombe nekubatanidzwa kweSiri neyechitatu-bato kunyorera, asi zvakare inofanirwa kuramba ichitarisira masevhisi ayo uye kwedu kuvanzika. Nekusabvumidza kunyorera senge zvataurwa pamusoro kuwana mukana weSiri, data redu rinenge rakachengeteka. Kana, zvakanaka, izvo zvingave zvinoshanda mune ese ari pamusoro kesi, kunze kwekuteerera zvemukati senge yekumhanyisa mimhanzi kana podcast. Asi, ndinodzokorora, zvinonzwisisika.
Ini, anga ajaira kushandisa mazhinji ekushomeka kwekushandisa kweimwe sisitimu yekushandisa (nhare kana desktop), haizokanganisike zvakanyanya neiyi yekutanga Siri kudzivirirwa. Uye newe?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Siri » Sei Siri Kubatanidzwa neTatu-Bato Mapurogiramu Anoshanda
Izvi ndizvo zvinoratidzwa neTeregiramu muPikicha basa rinotaridzika kunge pane iPhone
Nhau dzese muIOS 10